Umama uJah ufundisa i-agroecology ezinganeni ezikhungweni zemfundo enhliziyweni yaseBenin - Afrikhepri Fondation
Umama uJah ufundisa i-agroecology ezinganeni ezikhungweni zemfundo enhliziyweni yaseBenin
I-7 min ifundwe
A wasemuva eqotho imvelo, kuba endaweni yemvelo amahektha amane inhliziyo ehlathini Pahou, edolobheni Ouidah eBenin, Umama uJah eyasungulwa e-Awakening Centre, Animation kanye Ingqondo Izingane (CEVASTE): isikhungo semfundo esiyingqayizivele eBenin. Lokhu sixties eCameroon ukumamatheka yasekuqaleni iyathelelwana, ushiye Guadeloupe khona maduze 20 iminyaka zahlala e Benin lapho yena okwamanje uhlala nomyeni wakhe. Ngokubambisana ukudala EcoloJah, esikoleni samabanga aphansi e-CEVASTE amathuba izingane ezabe zincishwe amathuba zivela emaphandleni zize uchume ngokusebenzisa indlela ehlukile imfundo ehlanganisa umlando Pan-African kanye agroecology.
Insimu yase-Edene enhliziyweni yaseBenin
A amakhilomitha 25 kusukela Cotonou, inhlokodolobha kwezomnotho of Benin, Umama uJah eyakhelwe Garden yakhe yase-Edene: emaphandleni emvelweni nge esikoleni kokuba isisekelo wezolimo organic. Waphupha ngakho futhi namuhla kuyiqiniso. Babaziwa Ngokungenisa ukuzinikela kwayo emphakathini naye owayeyi-Rasta, inomlando omude ukubuya omkhulu Afro-inzalo ezwekazini lase-Afrika ukuba isibonelo Marcus Garvey, iphayona we ukunyakaza "Buyela ku Afrika" in the kwekhulu lamashumi amabili. Ukuzikhethela kweBenin, ikakhulukazi komasipala wase-Ouidah, ngakho-ke akuyona into ebalulekile ngoba ivikelekile ngaphambili enye yezingxenye eziyinhloko zezigqila zezohwebo ze-transatlantic. Esigabeni se-CEVASTE ukuthi lo mbhangqwana udala ku-1999, isikole shlobo olusha ngesikhathi esisodwa sibona usuku: EcoloJah, esinye isikole samabanga aphansi kanye nabafundi abayikhulu abavela ezindaweni zasemaphandleni. Ngaphandle kwemfundiso yendabuko yekharikhyulamu kazwelonke kaBenin, kugxile ekudluliseni amanani abalulekile, ukufundisa umlando wase-Afrika, kanye nemisebenzi eyenziwa njengama-agroecology. ezolimo zemvelo), ukukhiqizwa kwe-agri-food kanye nemisebenzi yezandla.
Namuhla umhlaba ovundile kakhulu yizingane
Nakuba imfundo ehlukile engeyona entsha eBenin, i-EcoloJah ngempela iyisikole sokuqala esiyinhloko ezweni lapho ezolimo, imvelo kanye nentuthuko eqhubekayo ziyala ngokwabo kanye umlando noma izibalo. Ngokusho kukaMama Jah, imfundo ehlukile iyadingeka namuhla. Ukholelwa ukuthi sekuyisikhathi sokuba abantu base-Afrika "baphume embonini yekoloni ukubeka imodeli emisha ezobamba izimpande ngokwabo kanye nokuhlangabezana nezidingo zabo."
Ukuvuselela umsebenzi womlimi
EBenin, izwe elaseNtshonalanga Afrika elinabantu abayizigidi ezingu-9 abahlala ku-60% ezindaweni zasemakhaya, ezolimo zidlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho. Naphezu kwezwe elimoya elihle nezwe elivundile elikhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene yokudla efana ne-yam, i-cassava noma ummbila, lo mkhakha ubhekene nezinselelo eziningi: ukungabi nokuqeqeshwa kwabalimi, ukufinyelela okunzima komhlaba izinsiza, izinkinga zemvelo kanye nokufuduka kwamakhaya.
Ngokwenza isikole esingapheliyo, uMama Jah wabe esilinganisa indima ebalulekile yomlimi emphakathini wanamuhla kanye nokubaluleka kokukhiqiza ukulima okuphilayo okufundiswa kusukela esemncane. Abafundi be-EcoloJah, ikakhulukazi ezivela emindenini engaphansi noma ehlukumezayo, bafunde ukukhulisa izithelo nemifino yabo, nokudla kakhulu imikhiqizo evela eMhlabeni.
Umthelela wale mfundo kulaba bantwana emkhakheni wasemaphandleni kuyinto ephawulekayo ngoba ngokufaka ukulima okuyizo ezifundweni zesikole kuvuselela umsebenzi obaluleke kunazo zonke kubantu. Ngokugqugquzela umsebenzi womlimi, izingane zingakwazi ukuqaphela ukubaluleka kwalo msebenzi futhi zifisa ukwenza umsebenzi wazo esikhathini esizayo.
Imodeli ehlukile eveza izithelo
Le ndlela, okuhlose ngayo ukuhambisana futhi ingahambisani nemfundo yasendulo, ngoba ihlanganisa imiyalo yohlelo lukazwelonke, isivele ithela izithelo. Uthi: “Baningana abafundi be-EcoloJah, abanelisekile ngesipiliyoni sabo, ngemuva kwalokho babhalisa izingane zabo lapho. "Izingane zethu nabazukulu bethu badlule kulesi sikole." Ubuye athi ukubaluleka kwe-Ecolojah "kungukuthi ihlose hhayi nje ukugcwalisa amakhanda abafundi kepha ikhiqize izidalwa ezithandana njengama-Afrika, abantu" ngonembeza "benomqondo wemfanelo wabo ukuze ngibe yi-Afrika uMama wethu uMhlaba ”. Namuhla enye yezinto ezibaluleke kakhulu yiyona imvelo. Isintu senze iphutha lokubona igatsha lapho sonke sihlezi esikuyo.
I-Agroecology, ikusasa lezolimo e-Afrika
EcoloJah, kugxile kwi-100% ezolimo eziphilayo, ezihlukahlukene futhi ezihlonipha imvelo. Nakuba kuyiqiniso ukuthi agroecology kuyinto ndlela ezibophezelekile xaxa zamanje nezindaba sezulu njengoba kuphambene imodeli zezimboni wezolimo besekela ukusetshenziswa okokufaka yemvelo (isibonelo umquba) ukuze ukusetshenziswa kakhulu kukamanyolo futhi izibulala-zinambuzane ezinamakhemikhali emapulazini, umthelela walo social kungaba bukhulu nakakhulu uma bekuyicala zisabalele e-Afrika. Ocwaningweni lwamuva olwenziwe i-English inhlangano Global Justice Now (Indlela Agroecology Can Okuphakelayo Afrika, 2015), agroecology kuchazwa ngokuthi ecosystem lonke ngoba encompasses bonke amathekhiniki ukulima okusimeme, amalungelo abalimi, socioeconomics nezinqubomgomo eziwukudla futhi sihlose nokwandisa umkhiqizo wezolimo, kuyilapho evikela izithakazelo abalimi kuqala esikhundleni kulabo abavela emazweni ehlukene. Ngokwe-abacwaningi, agroecology kungandisa ukukhiqizwa, amathuba emisebenzi, ukwehlukahluka kwezolimo, kuncishiswe kungalingani ngokobulili, ukuthuthukisa impilo, ukunciphisa yokufudumala kwembulunga yonke futhi ukondla lonke elase-Afrika.
I-agroecology ingenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokufinyelela ukuzaneliseka kokudla.
Imodeli yezomnotho esekelwe umnotho wezenhlalakahle
Esikhathini elikhulu engadini CEVASTE, laboratory agroecology Umama uJah ngokweqile ngokuthi "izincwadi wokwelusa" abafundi, etshalwa ezihlukahlukene ukudla ngokwemvelo kuhlanganise umkhiqizo engadini (ulethisi, izaqathe, beet, isitshalo seqanda, ama-cabbages, utamatisi, isipinashi, i-mint, i-basil); izilimo eziyizigaxa (amazambane, ama-tarots, ama-yam, i-cassava); kanye nezithelo (ukhukhunathi, ama-oranges, ulamula, ama-mango, ama-cashews, ama-avocados); kanye okusanhlamvu (ummbila omnandi nesoya). Imikhiqizo ukudla asetshenziswa kokubili ukuze awunikeze enkantini yesikole kanye abantu ohlala Centre (abasebenzi, amavolontiya izivakashi). Babuye akhangiswe ngokusebenzisa ngqo ukusatshalaliswa senethiwekhi phakathi abakhiqizi futhi abathengi isekelwe esimisweni Wezinhlangano Ukugcina ongumlimi Ezolimo (AMAP).
Izitshalo zemifino zimelela iningi lokudla okukhiqizwa eCevaste
I-CEVASTE iphinde ibe yindawo ye-agri-food processing section, ehlanganisa ngokuguqula isobho ngobisi, ushizi kanye ne-pâté nokukhiqiza izithelo zezithelo. Ukumaketha kwemifino kusiza imali ngemisebenzi yeSikhungo, kufaka phakathi isikole, futhi kungenye yezindlela zokuphila eziyinhloko zomndeni wakwaJah. Ngaphezu kwalokho, kukhona i-workshop yokukhiqiza yobuciko bezobuciko kanye nemisebenzi yezandla, ukuhlelwa kwezinkambiso zamasiko nezomlando, amakamu ezintsha kanye nezifundo ze-la carte. Imodeli yezomnotho kaCevaste isekelwe emnothweni ohlanganisiwe, wezenhlalakahle kanye nobumbano. Iphinde isekelwe ngabanikeli abaningana, kuhlanganise ne-Espace Africa Foundation.
Ukuzibophezela umama uJah ngoba imfundo, ukuvikeleka kwemvelo, ukubuya Emhlabeni, futhi ulwazi umlando lePan African amenza iforamu emsakazweni kazwelonke Benin lapho yena elibamba umbukiso masonto onke . Nakuba isikhungo ukuheha izivakashi abaningi abavela emhlabeni jikelele futhi inani labafundi likhula, Umama uJah uhlala uyazi isayithi uye washiya wokugcwalisa lokho ekubiza Injongo yayo: "ukwenza Cevaste endaweni zokuphila, zasekhaya ukulingisa ngakho njengoba ukuthonya abanye besintu ukubuyela indlela yokuphila ngokuvumelana nemvelo." futhi ukwenza lokho, yena uqokomisa izinselele eziningi namanje kudingeka sibhekane yilezi: nokwenza kahle isikhungo yesimiso sonozungezilanga sika, ekuthuthukiseni olwenzeka endaweni umthamo, kokuvula ezingeni lesibili lesikole anikezelwe kwezamabhizinisi maqondana nomkhakha emaphandleni, ekwakhiweni kwamashabhu amasha noma ukuthengwa kwebhasi elihamba ngezinyawo zabafundi, abaqeqeshwayo nezivakashi. Kodwa akayeki lapho. Iphupho lakhe? Phinda uphinde uphendule le modeli kwamanye amazwe ase-Afrika. Sifisa inhlanhla.